Suuragal ma tahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacda Soomaaliya? | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Suuragal ma tahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacda...
Suuragal ma tahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacda Soomaaliya?
Xilli doorashada Soomaaliya ka harsan tahay sanad ayaa wali waxaan kala cadeyn nooca doorasho ee uu dalka yeelanayo, maadaama sharciga doorashada uu horyalao barlamaanka, dhawaanna la filayo in uu go’aan ka gaaro.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta kulan la leh madaxweynayaashi hore ayaa agaasimaha madaxtooyada, Cabdinuur Maxamed waxaa uu sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadli doonaan ay tahay doorashooyinka 2020 iyo sidii ay Xukuumadda ugala shaqeyn lahaayeen in hannaan doorasho oo hufan oo qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo, awooddana dib loogu celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madax iyo xildhibaanno iyaga si toos ah wakiil uga ah.
Inkastoo guddiga doorashooyinka madaxabanaan ee Soomaaliya uu sheegay in uu u diyaar garoobay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah, dadka qaarna ay su’aal gelinayaan arrintaas iyo xalaalnimada ayaa hadana waxaana la ogeyn sida arrintaas ay isugu waafaqi doonaan dhinacyada siyaasadda oo ku kala boodsan arrima badan oo ay ka mid tahay qaabka Dowladda ay ula dhaqanto maamul goboleedyada iyo siyaasadda haatan ay Dowladda ku maamusho dalka.